Ungasarudze sei sutu yekudzidzira vana ye ballet - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Maitiro ekusarudza sutu yevana ballet yekudzidzira
1. Ruvara rwunoenderana
Unoda kuita mutongo kubva kumuviri nemuvara rweganda pamusoro pezvose, kana uri musikana mudiki ane ganda rakasviba, anofanira kutanga kusarudza mwenje wakakwirira, kuchena kwakanyanya, rakapenya-rakapfeka dhizaini rekuita, rakadai dhiraini rinogona kuoneka riri mweya, richirova. Kana musikana mudiki aine ganda rakareruka, anozova nehupamhi hwakawanda hwekuenderana neruvara. Semuenzaniso, kana akapfeka pink, yero kana tsvuku, anozoonekwa ane hupenyu uye anopenya. Kunyangwe akapfeka grey orblack, achaonekwawo akanaka uye akanaka, achipa akasununguka uye echisikigo kunzwa. Nepo uchicherekedza ruvara uye ruvara rwevana rweganda foto kuenderana, chimiro chinoona vana kunyangwe nevana vanopfeka colourcollocation.
2. Kufananidza kwemaitiro
Hunhu hwevana hunofanira kutanga hwafungidzirwa. Mukuita kwekutamba, mwero wekunyaradza wecostumesis chinhu chakakosha kwazvo, icho chinofanirwa kuratidzwa nehunhu hwakasununguka. Munhu wemwana ari kukura. Izvo zvinomuitira zviri nyore kuti apfeke zvakapfava, zvemahara uye zvakapusa uye zvakasununguka zvipfeko uye kutamba mitambo nemitambo. Iva anobatsira mukukudziridzwa kwemuviri kare, zvakadaro zvinogona kupa munhu mhando yeakanaka uye anodakadza, akasununguka, pfungwa yekusarudza.
3. Zvinhu zvinoenderana
Nekuti vana vane hupenyu uye vanoshanda, hapana kuziviswa kwekuchengetedza zvipfeko, saka jira rezvipfeko zvevana rinofanira kusimbisa, kusimba, kwete nyore kukuvadza; Panguva imwecheteyo, kunyaradzwa kwejira kunofanirwa kutariswa. Usasarudze machira ekugadzira emwana wako. Zvipfeko zvakagadzirwa nemakemikari tambo, kunyanya zvipfeko zvemukati, zvinogadzira magetsi emuviri apo muviri wemunhu uri kufamba pakati peganda nezvipfeko, uye pakati pezvipfeko nezvipfeko. Static magetsi ine yakasimba kwazvo yekuvhara maitiro, kwete chete yekukuvadza mashandiro mbatya, asi zvakare inokanganisa hutano.
4. Sarudzo yehukuru
Ungasarudza sei yakakodzera vana yekupfeka sizemeasurement nzira yekusarudza yakakodzera vana kupfeka? Nzira iri nyore ndeyekuti mwana aiyedze kana kuwana chiyero chaicho, asi kana mwana asipo kana asingakwanise kuyerwa, hurefu hwemwana hunogona kuverengerwa mwana.
Yapfuura:Vanhu vazhinji havanzwisise ballet
Tevere:12 zodiac exclusive tutu! Rudzii rweutu runoratidza chiratidzo chako?